Maitiro ekudzoreredza rakadzimwa Izwi faira | Gadget nhau
Parizvino, avo vasingaite backup ndeyekuti ivo havadi, sezvo isu tiine nhamba huru yesarudzo panguva iyoyo gara uine ruzivo rwakanyanya kukosha munzvimbo yakachengeteka, kungave kuburikidza neiyo inoshanda sisitimu pachayo kana kuburikidza akasiyana akasiyana gore ekuchengetedza masevhisi.
Kana iwe wasvika ino chinyorwa, pamwe uri kutsvaga nzira yekudzosera Izwi refaira iro risisiri pasi pedu pasi pechikonzero chero chikonzero (uye kune akawanda). Kana iyi iri nyaya yako, heano matanho ekutevera kuitira kuti dzosera zvakadzimwa mafaera eShoko.
Maitiro ekudzosera yakabviswa Excel faira
Kubva kuActualidad Gadget tinogara tichikurudzira gadzira kopi yenguva dzose ye data rako rese kuitira kuti kana zviitiko zvikarega kushanda, tinogona kukurumidza kudzoreredza akakosha mafaera. Nekudaro, zvinosuwisa kuti tinogona kuwana dambudziko ratisina: kuti faira rinobviswa, rinonyangarika kubva pakuona kwedu kana kuti isu hatisi kurichengeta.
1 Tora zvakare faira reIzwi ratisina kusevha
1.1 Shandisa AutoRecover muIzwi
2 Tora zvakare faira reExcel ratakabvisa
2.1 Kudzokorora bhini
2.2 Tora zvekare zvekare shanduro dzefaira
2.3 Dzosera Windows Backup
3 Tora zvakare faira reIzwi ratisingakwanise kuwana
4 Uye kana zvese zvimwe zvikatadza ...
Tora zvakare faira reIzwi ratisina kusevha
Kana isu takavhara kunyorera uye isu hatina kutora chengetedzo yekuchengetedza kopi, zvese hazvirasike, sezvo Hofisi ichiziva nezverudzi urwu rwematambudziko uye inotipa isu, kuburikidza neAuto-kudzoreredza sarudzo, mukana we dzosa iro basa ratakachengeta chero chikonzero, kusanganisira kana simba radzima, kana isu tisisina bhatiri muLaptop.
Kuti tigone kuwana otomatiki makopi anogadzirwa neIzwi, tinofanirwa kuwana File> Ruzivo> Manage zvinyorwa> Tora zvinyorwa zvisina kuchengetedzwa. Tevere, izvo zvemukati mefaira zvinoratidzwa panochengeterwa akasiyana makopi ekuchengetedza.
Shandisa AutoRecover muIzwi
Shanduro dzichangoburwa dzeMicrosoft Office dzinosanganisira iyo auto-yekudzoresa natively, kunyangwe ichi chiitiko chingave chisinga goneswe. Kudzivirira zvingangoita matambudziko, zvakanakisa zvatingaite simbisa kuti yakaitwa uye kudzora auto-yekuchengetedza nguva. Kuti utarise kana auto-kugadzirisa basa riri kushanda muIzwi, isu tinofanirwa kuita anotevera matanho:
Dzvanya pa Archive uyezve Sarudzo.
Tevere, isu tichaenda ku Chengetedza, sarudzo inowanikwa mukoramu kuruboshwe uye chikamu kurudyi, tinotarisa kuti bhokisi rakadii Sevha AutoRecover ruzivo chakaiswa mucherechedzo.
Imwe yemabhokisi, iyo inofanirawo kuongororwa iri Chengeta yazvino vhezheni yakangoerekana yadzorerwa pandinovhara ndisina kuchengetedza.
Pakupedzisira, tinofanira simbisa nguva dzose tinoda kuti backup iitwe. Nekukanganisa, iyo yakamisikidzwa nguva ndeye maminetsi gumi, asi kana tichida kuzvirapa pachedu mune hutano, tinofanira kuidzikisa kusvika 10 miniti.
Tora zvakare faira reExcel ratakabvisa
Kunyangwe paine chokwadi chekuti vashandisi vazhinji havade kuona kuti iyo yekudzokorora bhinni inogara izere sei uye ivo vachiramba vachionekwa akasungwa kuiburitsa, kana kudzima mafaera usinga pfuure napo, sevhisi iyi (nekuti hachisi chikumbiro chaizvo) ndeimwe zvigadzirwa zvakanakisa munyika yekomputa, uye izvo zvinowanikwawo zvese muMacOS uye mune dzakasiyana dzakasiyana dzeLinux.
Iyo yekudzokorora bin inodurura otomatiki mazuva ese makumi matatu, kana tisingazviite kare. Iyi ndiyo nzvimbo yekutanga yatinofanira kutarisa kuti tione kana takanganisa kubvisa faira kana kuti hatigone kuiwana pane yedu hard drive, chero bedzi isu tisingarambe tichiiburitsa, nekuti neimwe nzira, isu tichafanirwa kuenda kune dzimwe nzira tinokuratidza mune ino chinyorwa.
Tora zvekare zvekare shanduro dzefaira
Kana isu tisingakwanise kuwana vhezheni yefaira ratakashanda panguva yekupedzisira, Windows 10 inotipa iyo recovery system iyo inotibvumidza isu kuwana yapfuura shanduro dzeiyo imwecheteyo faira, rakanakira basa kana isu tichida kudzoreredza chikamu cheruzivo icho chataive tambobvisa asi iko zvino chave kuda.
Ichi chimiro hachiwanikwe zvakananga kubva kuHofisi, pane kudaro iri chikamu cheWindows operating system. Kuti tigone kuwana shanduro dzekare dzefaira rakapihwa, tinofanirwa kutanga tawana nzira yefaira. Tevere, isu tinoisa mbeva pamusoro pefaira uye tinya bhatani bhatani kuti uwane mamiriro aro ezvinhu.
Nhanho inotevera ndeye kudzvanya pakudzorera shanduro dzekare. Panguva iyoyo, bhokisi rebhokisi rine shanduro dzese dzatakagadzira dzegwaro rakafanana. Kudzoreredza iyo vhezheni yefaira iri mubvunzo, isu tinongofanirwa kuisarudza uye tinya pane yakavhurika. Shanduro dzese dziripo dzakarairwa nezuva, saka kana tikaziva rinofungidzirwa zuva, ichave iri nyaya yemasekondi kutora data.
Dzosera Windows Backup
Kana isu tasvika apa panguva nechinangwa chekukwanisa kudzoreredza faira, isu tinofanirwa kuziva kuti Uyu ungave mukana wedu wekupedzisira kuzviita chero bedzi isu takatora chengetedzo yekuita nguva nenguva kugadzira makopi ekuchengetedza, nekuti zvikasadaro hazvigoneke kuyedza kudzoreredza kopi yefaira kubva kwairi isiko
Microsoft kuburikidza neWindows 10 inotipa yakakwana system ku ita zvinowedzera backups Pamafaira ese atakashandura pane imwe nguva, nemafaira ndinoreva magwaro, kwete mafaera ari chikamu chezvirongwa, nekuti kopi yekuchengetedza inogona kutora makumi eGG.
Kana iyi iri nyaya yedu, isu tinofanirwa chete kuwana iyo nhoroondo ye backup mafaira uye tsvaga iyo nzira yaive iyo faira kana yaifanirwa kuwanikwa. Kana mushure mekubvisa iyo faira, takaita backup, zvinosuwisa kuti tinoona kuti hapana nzira inogoneka yekudzosera faira.
Tora zvakare faira reIzwi ratisingakwanise kuwana
Iko kumhanyisa kwakaipa chipangamazano kune zvese. Kana isu takagadzira gwaro uye mukumhanya hatirangarire kwatakavachengeta uye kana tichitsvaga pasina nzira yekuzviwana, isu tine mhinduro mbiri kudambudziko diki iri. Chinhu chekutanga kuita kuvhura Shoko uye enda kuVhura. Mukati meichi chikamu, mafaera ese atakarongedza kana achangobva kugadzirwa anozoratidzwa. Isu tinongofanirwa tinya pabepa riri mubvunzo uye ndizvozvo.
Kana ikasaoneka mune ino runyorwa, imwe sarudzo ndeye kushandisa iyo Mahwindo ekutsvaga bhokisi, iri padyo nebhatani rekutanga. Kuti tiwane gwaro, isu tinongofanirwa kunyora chikamu chemavara kana mazwi isu atinoziva kuti ari mukati megwaro, haifanire kunge riri zita refaira.
Kana tangowana iyo faira iri mubvunzo, isu tinofanirwa chengeta iko kwatinoziva kuti tichagara tinayo pasina moyo wedu uchitambura zvakare nekusawana iyo faira yatinoda.
Uye kana zvese zvimwe zvikatadza ...
Kana isu tisingakwanise kuwana iyo faira kana mafaera atiri kutsvaga, iyo chete sarudzo yatakasiya, pane nguva dzose mukana wekupedzisira, ndeyekushandisa akasiyana maficha atinawo kwatiri dzosera mafaira akadzimwa. Zvichienderana nenguva yadarika kubva payakanyangarika, zvingave zviri nyore kana zvishoma kuyedza kuitora.
Izvi mhando mafomu, haishande nguva dzose, saka usati washandisa mari, iwe unofanirwa kuedza mahara maBhaibheri avanotipa, shanduro dzinokutendera kuti utore hard drive yako kuti ibviswe mafaera. Kana ichiri nesarudzo yekudzosa, nekuti haina kukuvara, inguva yekufunga kana zvakakodzera kubhadhara iyo yakazara kunyorera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Software » Maitiro ekudzoreredza rakadzimwa Izwi faira
Tone Ultra uye Tone Inoshanda +, iyi ndiyo nhanho yeLG yeanogona kudzoserwa mahedhifoni